Islot slot ialuminium extrusion -- fscyal.com
Iphrofayili ye-aluminium ye-T-slot yase-Changyuan isebenzisa isindululo esiqhubekayo okanye esiphakathi kwebhanti yokuhambisa ukuhambisa izinto ezahlukeneyo zokukhanya kunye nobunzima. Ingahambisa izinto ezahlukeneyo, Njengamaqhekeza amancinci eempahla ezinjengeebhokisi zekhadibhodi kunye neebhegi zokupakisha. Ibanzi kakhulu. Ukongeza ukuthuthwa kwezinto eziqhelekileyo, ingadibana nokuthuthwa kwezinto ezinemfuno ezizodwa ezinje ngokuxhathisa ioyile, nokumelana, kunye ne-antistatic. Ibhanti yokuhambisa ibakala lokutya elikhethekileyo isetyenziselwa ukufezekisa iimfuno zokutya, amayeza, kunye nemizi-mveliso yemichiza yemihla ngemihla.
Thumela i-imeyile kuthi Qhagamshelana Ngoku Khuphela njengePDF
Iinkcukacha Product Ingxelo ngoku
Iphrofayili ye-Aluminium extrusion yeT-slot
Thumela lo mbuzo okanye usithumelele i-imeyile undixelele iimfuno, siya kuyilungiselela yona.
Iphrofayili ye-aluminium ye-T-slot yase-Changyuan isebenzisa isindululo esiqhubekayo okanye esiphakathi kwebhanti yokuhambisa ukuhambisa izinto ezahlukeneyo zokukhanya kunye nobunzima. Ingahambisa izinto ezahlukeneyo, Njengamaqhekeza amancinci eempahla ezinjengeebhokisi zekhadibhodi kunye neebhegi zokupakisha. Ibanzi kakhulu. Ukongeza ukuthuthwa kwezinto eziqhelekileyo, ingadibana nokuthuthwa kwezinto ezinemfuno ezizodwa ezinje ngokuxhathisa ioyile, nokumelana, kunye ne-antistatic. Ibhanti yokuhambisa ibakala lokutya elikhethekileyo isetyenziselwa ukufezekisa iimfuno zokutya, amayeza, kunye nemizi-mveliso yemichiza yemihla ngemihla. Emva konyango lomphezulu(anodizing), imbonakalo yealuminiyam igudile. Xa sele igalelwe ioyile, Kulula kakhulu ukucoca. Xa umgca womhlangano iiprofayili ze-aluminium zihlanganiselwe kwiimveliso, Ukucaciswa okwahlukileyo kweeprofayili zomgca wendibano kunokusetyenziswa ngokweendlela ezahlukeneyo zokulayisha, kunye nokuhambelana kwezinto zeprofayili yealuminium kuyasetyenziswa.
1 Uhlobo lweshishini Umenzi
2 Imigangatho: I-GB 5237-2008; EN755, njl.,
3 Uthotho lwemveliso: Iprofayile yeAluminiyam yokwakha kunye nezinto zeshishini.
4 Ixabiso: Ngokusekwe kwixabiso leNanhai Aluminium Ingot(http://www.lvdingjia.com/) + Imali yokuqhubekeka
5 Ixesha lokuhlawula: T / T., L / C kwimbono
6 Unyango oluphezulu: Mill gqiba, Ukuhlaziya, Ukutyabeka umgubo, Umbane, Ukugqitywa komthi, Ukuthuka ngobushushu
7 Ingxubevange: 6063
8 imeko: T4 / T5 / T6
9 ubude 1m-7m, ngokubanzi i-5.85m yesikhongozeli
10 Ubungakanani obuqhelekileyo be-Anodizing: UMLINGANISELO >10 encinci,
11 Ukuqina komgubo oqhelekileyo: >40encinci
12 ubukhulu: 0.4mm 0.5mm 0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.4mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm njl..
13 Ixabiso Ixabiso le-NH / LME yamabanga aphantsi + iindleko zokuguqula ezona khuphiswano
14 Nkqubo zomngundo Into nganye ethengiweyo yevolumu iya kwi 1 iitoni, ukubuyiselwa kwemali yentlawulo
15 Ixesha lokuhanjiswa ngaphakathi 20 Iintsuku ukusuka kwixesha loku-odola
16 Ixesha lokuhlawula 30% idiphozithi, intlawulo eseleyo kwi-B / L ikopi ngaphakathi 7 iintsuku
17 Ukupakisha umgangatho ifilimu yokukhusela ngaphakathi, ifilimu engaphandle yokuncipha okanye iphepha elingqingqwa
18 Isiqinisekiso I-SGS / TUV - I-ISO9001:2008 - ISO14001:2004 I-CE RoHS
19 Ukusetyenziswa Isilayidi, indawo yokuhlala, iifestile, iingcango, udonga lomkhusane, ishishini, ukuhombisa uphahla, ucingo, Indawo yokukhusela
20 OEM Iiprofayili ze-aluminium ezenziwe ngokwezifiso ziyafumaneka
Uncedo yepropathi ye-T-slot aluminium:
Kuyimfuneko ukuqonda ngokupheleleyo izibonelelo zeeprofayili zeT-slot aluminium, ukuze sikwazi ukukhetha ngcono kwaye sisebenzise iiprofayili zealuminium.
1.Yenza lula inkqubo yoyilo yomzobo
Ngenxa yokusetyenziswa kweefayile zeT-slot aluminium, ngokweemfuno ezahlukeneyo, Umgaqo webhloko yokwakha ungasetyenziselwa ukufakela iintlobo ezahlukeneyo zesakhiwo, eyenza lula uyilo kwaye icuthe umjikelo wemveliso. Xa kuthelekiswa nezakhi zetsimbi, ithintela ulwakhiwo oluntsonkothileyo, iindawo ezininzi, kunye nokungalungi komthwalo omkhulu kuyilo kuthotho.
2.Lula inkqubo yemveliso
Kungenxa yokuba amanyathelo okuqhubekeka kwesakhiwo seprofayile ye-T-slot yealuminium afuna kuphela ukungabinanto, Ukubetha ngamanqindi kunye nokugoba okumbalwa, ukuqhubekeka kulula, ibandla lilungele, ukuqhubekeka kwamanyathelo amaninzi kulwakhiwo lwe-iridium kuthintelwe, kwaye inkqubo yemveliso yenziwe lula kakhulu. Ngaxeshanye, Ubuninzi beshiti yesinyithi yokusebenza kwamandla kuncitshisiwe, engaphuculi kuphela ukusebenza ngokukuko kwemveliso kodwa ikwaququzelela ukusetyenziswa kweendlela zokuvelisa ezizenzekelayo.
3.Ukunciphisa ubunzima besixhobo
Ngokwezibalo, Ityala isixhobo se-elektroniki samkela isiseko sealuminium, emalunga noko 60% ilula kunesakhiwo sentsimbi esenziwe ngentsimbi.
4.Ukunciphisa inani lezixhobo kunye nokubumba
Ngokwezibalo, idesktop yeshiti yentsimbi chassis ifuna malunga 40 ukubumba, Ngelixa ulwakhiwo lweprofayile yealuminium ifuna kuphela ubuninzi be 20 ukubumba.
6.Kulula ukugcina kunye nokuhambisa
7.Ukulungiselela ukumiselwa komgangatho, Ukwenza ngokubanzi kunye nokwenza serialization
8.Xa kuhlanganiswa imveliso egqityiweyo, ukuwelda akufuneki, ikulungele ngakumbi okusingqongileyo, kwaye kulula kakhulu ukuyifaka, ukudibanisa, thwala uhambe.
9Imveliso yendibano yeT-slot aluminium iimveliso zinezibonelelo zamandla aphezulu, ubunzima bokukhanya, nokumelana, umhombiso olungileyo kunye nobomi benkonzo ende.
10.Iphrofayili yelayini yealuminium iphathwa ngobushushu nge-6063-T5, kunye ne-A00 ye-aluminium ecocekileyo isetyenziselwa ukukhupha. Ukubunjwa kwe-aluminium kufikelela kumgangatho wesizwe kunye noshishino.
11.Ubulukhuni beeprofayili zomgca wealuminium 9-13 izidanga.
12.Indlela yokupakisha yamkela ifilimu yokuncipha okanye iperley yokupakisha ukuthintela ukukrwela kunye nokugungqa ngexesha lokuhamba.
Isiqinisekiso se-CE, I-SGS, I-ISO9001, Uqinisekiso lwe-ISO14001 kunye neRoHS
Indawo yesicelo yeefayile ze-t-slot aluminium yeefektri inkulu kakhulu. Ukongeza koomatshini nezixhobo, oomasifundisane abaninzi banezinto ezahlukeneyo zezixhobo zehardware, ezifana neetafile zeprofayili zealuminium, iishelfu, izikhongozeli, Imigca yokuhlanganisa, amaqonga ezithuthi ezizihambelayo, njl., kunye neendlela ezahlukeneyo zokuxhasa.
Changyuan aluminiyam inezi zibonelelo:
Ngaphezulu 30000 ubeka isikhunta kwindawo
Engaphezulu kwe 400 abaqeshi
Ukukhutshwa kwemveliso emibini, ukunyibilika, anodizing, i-electrophoresis kunye nokucoca umgubo
Q1: Ngaba uthengisa inkampani (Ummeli) okanye umenzi?
Singumenzi wealuminium waseTshayina eFoshan China, sineefektri ezimbini eGuangdong.
Umbuzo: Ndingabeka iodolo yesampulu kuqala?
EWE, ungabeka iodolo yesampula kuqala.
Umbuzo: lithini ixesha lakho lokuhlawula?
Singayamkela i-T / T kuphela ngoku, 30% idiphozithi kunye 70% Intsalela yokuhlawula ngaphambi kokuhambisa.
Samkelekile ukuba uze kuhlola ngaphambi kokuba uhlawule.
Iimpawu：Iphrofayili ye-Aluminium extrusion, ialuminiyam extrusion, iprofayile yealuminium extrusion, iprofayile yealuminium, iprofayile yealuminium yemizi mveliso, Islot slot ialuminium extrusion
Aluminium iprofayili extrusion for V-slot
Iphrofayili ye-Aluminium extrusion ye-tube ye-industrial